A ga-agọzi ndị mba ọzọ na ndị ọnaozi (1-8)
Ụlọ ekpere maka mba niile (7)
Ndị nche kpuru ìsì bụ nkịta dara ogbi (9-12)
56 Jehova kwuru, sị: “Na-emenụ ihe ziri ezi,+ na-emekwanụ ezi omume,N’ihi na oge m ga-abịa zọpụta ndị mmadụ dị nso. M ga-emekwa ka a mara na m bụ onye ezi omume.+ 2 Onye na-eme ihe a na-enwe obi ụtọ. Onye na-edebe iwu m,Nke na-edebe Ụbọchị Izu Ike, gharakwa imerụ ya,+Onye na-anaghịkwa ekwe ka aka ya dịrị n’ụdị ihe ọjọọ ọ bụla, na-enwe obi ụtọ. 3 Onye mba ọzọ nke na-efe Jehova+ ekwesịghị ịsị,‘Jehova ga-esi ebe ndị ya nọ chụpụ m.’ Ọnaozi ekwesịghịkwa ịsị, ‘Abụ m osisi kpọrọ nkụ.’” 4 N’ihi na e nwere ihe Jehova gwara ndị ọnaozi ndị na-edebe ụbọchị izu ike ya, ndị họọrọ ime ihe na-amasị ya, ndị jikwa ọgbụgba ndụ ya kpọrọ ihe. Ọ sịrị ha: 5 “M ga-enye unu ebe unu ga-anọ n’ụlọ m, rụọkwa ihe m ga-eji na-echeta unu n’ogige ụlọ m. M ga-echetakwa aha unu. Ihe ndị a ka ụmụ ndị nwoke na ụmụ ndị nwaanyị mma. M ga-eme ka e dee aha unu n’akwụkwọ, ya adịrị ruo mgbe ebighị ebi. A gaghịkwa ehicha ya ehicha. 6 Ndị mba ọzọ, ndị bịara ka ha soro na-efe Jehova,Ka ha hụ Jehova n’anya, jiri aha ya kpọrọ ihe,+Bụrụkwa ndị ohu ya,Ndị niile na-edebe Ụbọchị Izu Ike, ndị na-anaghịkwa emerụ ya,Ndị na-ahapụghịkwa ọgbụgba ndụ m, 7 M ga-akpọrọ ha bịa n’ugwu nsọ m,+Meekwa ka ha ṅụrịa ọṅụ n’ụlọ ekpere m. M ga-anabata àjà a na-esucha ọkụ na àjà ndị ọzọ ha ga-achụ n’elu ebe ịchụàjà m. N’ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mba niile.”+ 8 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, onye na-akpọkọta ndị Izrel a chụsara achụsa,+ kwuru, sị: “M ga-akpọkọtara ha ndị ọzọ ma e wezụga ndị nke a kpọkọtara akpọkọta.”+ 9 Anụ ọhịa niile na anụ niile bi n’oké ọhịa,Bịanụ rie ihe.+ 10 Ndị nche kpuru ìsì.+ E nweghịkwa onye n’ime ha ma ihe na-emenụ.+ Ha niile bụ nkịta dara ogbi, nke na-anaghị agbọli ụja.+ Ha na-eku ume ọkụ ọkụ, makpurukwa ala. Ịrahụ ụra na-atọgbu ha atọgbu. 11 Ha bụ nkịta nwere oké akpịrị. Afọ anaghị eju ha eju. Ha bụ ndị ọzụzụ atụrụ na-anaghị aghọta ihe.+ Ha niile echeela ihu n’ụzọ nke ha. Onye ọ bụla n’ime ha na-eji aghụghọ achọ ihe ga-abara naanị ya uru, na-asị: 12 “Bịanụ ka m gbata mmanya,Ka anyị ṅụrọọ anya ná mmanya.+ Echi ga-adịkwa ka taa. Ọ ga-akadị taa mma.”